Isikhangeli esinye, isikhangeli esikhawulezayo kunye nesisimahla kwiwebhu | I-Androidsis
Isikhangeli esinye, isikhangeli sewebhu esimahla
Ukuqhubeka nomgca wokukwazisa ezona zicelo zisimahla zesixhobo sethu se-Android, namhlanje ndifuna ukubonisa oku isikhangeli esikhulu sewebhu kubizwa Isikhangeli esinye igcwele iindlela ezintle kakhulu zokukhangela ngokukhawuleza kunye nomgangatho.
Isikhangeli esinye Yeyona ndlela ilungileyo kwi, ngesiqhelo ayikhange iqwalaselwe kwisikhangeli, esiza kumgangatho kwisiphelo sethu Android.
1 Inqaku elinye loMkhangeli
2 Ekhaya Main
3 Ukuhamba ngokuzimela kwefestile
4 Umdibaniso no-Evernote
Inqaku elinye loMkhangeli
Isebenza ngeenguqulelo ze-Android 2.1 okanye ngaphezulu
Ikhaya eliphambili ngokufikelela ngokukhawuleza kwi-Facebook, uGoogle, uGmail, uYahoo, uWeChat, uWikipedia, iiVidiyo kunye neeVenkile.
Ikhaya eliphambili elinokuqwalaselwa ngamaphepha ethu awathandayo.
Ukubonakalisa kwiKhaya eliphambili leziza zokugqibela zokundwendwela.
Inketho yokuphuma ngokupheleleyo kwisikhangeli ukuze ingahlali isebenza ngasemva.
Umdibaniso opheleleyo no-Evernote.
Yabelana ngemifanekiso ngonqakrazo olude emfanekisweni.
Ukuhamba ekunene kwelona Khaya liphambili sifumana iingcebiso ngokweminqweno yethu kunye nembali yethu yokukhangela.
Eyona nto intle kunayo yonke yile isantya olayisha ngaso amaphepha ewebhu, isikhangeli endikhe ndasivavanya iintsuku ezininzi kwaye ndiyathanda ngakumbi nangakumbi.
El Eyona nto iphambili ekhaya Esona sikrini siphambili esiza kusibona xa sivula isikhangeli sewebhu Isikhangeli esinye, Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye iqwalaselwe ngokupheleleyo ngumsebenzisi.
Kuyo sinokufumana iindlela ezimfutshane ukuya Facebook, Uphando, inbox y Yahoo Phakathi kwezinye iindlela, sinokongeza amaphepha esiwathandayo ukuze afikeleleke ngokukhawuleza.
Ifakiwe kwifayile ye- Eyona nto iphambili ekhaya, ngezantsi nje kwamaphepha ethu awathandayo, imbali yeendawo zokugqibela zokundwendwela.
Ukuhamba ngokuzimela kwefestile
Olu khetho aluhlukanga kwezinye iibrawuza zesitayile, isinika ithuba lokufikelela kwifayile imbonakalo yamaphepha esisebenza nawo ukufikelela ngokukhawuleza ukusuka kwelinye ukuya kwelinye okanye ukuvala ezo zingasenamdla kuthi.
Isikhangeli esinye isinika ukudityaniswa okupheleleyo kunye vernote ukugcina okwangoku imifanekiso okanye ukugcwalisa iphepha lewebhu esilifunayo.
Sikwanokukhetha isabelo kunye nezicelo esizithandayo, zombini iphepha lewebhu kunye nemifanekiso efanayo, ngendlela elula nangokucofa nje ngokulula.
Ndithe a umgangatho wewebhu kwaye ngokukhawuleza okungadli nokutya izixhobo zefowuni yethu, simahla simahla kwaye ngaphandle kwemida, isicelo esinconyelwe ngokupheleleyo.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Uyikhuphele njani i-e-pub yasimahla ye-Android yakho, (iincwadi zikwifomathi yekhompyuter)
Khuphela - Isikhangeli esinye kwiVenkile yokudlala
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Isikhangeli esinye, isikhangeli sewebhu esimahla
UFrancisco Cruz Badilla sitsho
Uxolo, ungathi kungcono kuneGoogle Chrome ye-Android? Ndibuza ngokuthe ngqo ngothelekiso neChannel kuba yeyam yeyona ilungileyo ukuza kuthi ga ngoku, kwaye ndivavanye malunga neebrawuza ezisi-8. Enkosi
Phendula uFrancisco Cruz Badilla
Ikhaphukhaphu kune-chrome, kodwa umzekelo umsebenzi wokuvumelanisa i-chrome bookmark ayinayo.
Zizinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, kungcono ukuba uzame kwaye ufumane izigqibo zakho.
Nge-23/04/2013 ngo-18: 24, «Disqus» wabhala:
Uyifaka njani iPlay Station Mobile kuyo nayiphi na ifowuni ye-Android
Uyikhuphele njani i-e-pub yasimahla ye-Android yakho, (iincwadi zikwifomathi yekhompyuter)